Ityhubhu yethu yelungu lobufazi le-4ml yenziwe ngezinto ze-PE, ezinokutywinwa okungcono kunye nokutyibilika. Umbhobho ujikeleze. Ngaba unokubonelela ngokuziva ngcono kunye neshelf yokubonisa isiphumo. Xa usebenzisa, inyathelo lokuqala kukususa isiciko esingaphambili kunye nesomva, inyathelo lesibini kukungqamanisa indawo yokuphuma iziyobisi kwilungu lobufazi okanye ezimpundu, kwaye inyathelo lesithathu kukusebenzisa isiciko eside ukutyhala intonga yokutyhala ungene kumbhobho ukutyhala iyeza elikwityhubhu lingene kumbhobho okanye kwilungu lobufazi okanye ezimpundu. Ingasetyenziselwa ukuhambisa iziyobisi kwilungu lobufazi, ukhathalelo lobufazi, ukuhanjiswa kweziyobisi ezimpundu, ukupakishwa kukhathalelo lwasemva, njl njl. Kulula ukuphatha nokusebenzisa.
Okulandelayo: Ibhotile ye-2 oz emhlophe ye-hexagon ene-34-400 yokugqiba kwentamo
0.33 oz 10ml ecacileyo PMMA (acrylic) yokutshiza zeplastiki ...
0.2 oz yegolide PET ibhotile ngeenxa 32-400 intamo ...